स्वास्थ्य सन्देश Archives - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
घरमा कमिलाको ताँती आएको छ भने नमार्नुहोस,यस्ता संकेत र भाग्य मेट्दै हुनुहुन्छ !
२०७९ वैशाख २७ गते ०:०८
काठमाडौं । घरमा कमिला आउने जाने गरेको देख्नुभएको छ भने यसले केही संकेत गर्न खोजेको हुनसक्छ । ज्योतिषका अनुसार घरमा कमिला आउनु भनेको जीवनमा हुने परिवर्तनको संकेत हो ।यदि घरमा कालो कमिलाको आवत जावत हुने गरेको छ भने यसले भाग्योदयको संकेत गर्छ । कालो...
दाँतमा जमेको मैलो जमेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् अत्यन्तै सरल ३ तरीका, हप्तामै चम्किनेछन्
२०७९ वैशाख २६ गते २२:०८
काठमाडौँ । तपाइँले अक्सर देख्नु भएको छ कि गलत खाने बानी को कारण, मानिसहरुको दाँत धेरै चाँडै बिग्रन थाल्छ। र यसको मुख्य कारण पान,सुर्तिजन्यजस्ता पदार्थहरु र धुम्रपान गर्ने कारणले हुने गर्दछ। हामी आफ्नो दाँतलाई दाँतलाई रगडि रगडि सफा गर्ने गर्दछौँ । तर हाम्रो दाँत...
महिनावारी भएकाे बेलामा पेट दुख्ने समस्या भएका महिलाहरुका लागि प्याजले गर्छ औषधीकाे काम
२०७९ वैशाख २६ गते २१:३०
काठमाडौं । काँचो प्याजको सेवनले कैयौँ समस्याको समाधान गर्छ । तपाई हाम्रो भान्समा दैनिक रुपमा उपभोग हुने प्याजले क्यान्सर देखि मधुमेह सम्मको रोगसँग लड्न मद्धत पुग्छ । चिकित्सकका अनुसार दिनहुँ प्याज खाँदा मुटुसम्बन्धी विभिन्न समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । नियमित प्याजको सेवनले शरीरमा इन्सिुलेसनको...
ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? भूलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, नत्र हुन्छ अल्सर र क्यान्सरको जोखिम
२०७९ वैशाख २५ गते १७:२९
काठमाडौं । “भनिन्छ हरेक नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ ।” खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ। ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ। यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान...
२०७९ वैशाख २५ गते ९:४९
काठमाडौं । अहिले पनि परिवार नियोजनको साधन प्रयोगबारे विभिन्न भ्रम यथावत छन् । अझ स्थायी बन्ध्याकरणले स्वास्थ्यमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ भन्नेे धारण राख्नेको संख्यासमेत ठूलो छ । सत्य के हो त ? परिवार नियोजन अंग्रजीमा ‘फेमेली प्लानिङ’ भनिन्छ । खासगरि नेपालमा प्रायले परिवार नियोजन...
के भ्यासेक्टोमी गरेपछि पुरुषको यौन क्षमतालाई असर गर्छ..?
२०७९ वैशाख २५ गते ९:४७
काठमाडौं । भ्यासेक्टोमी पुरुषले गर्ने स्थायी बन्ध्याकरण हो । यो सुरक्षित सामान्य शल्यक्रिया (अपरेशन) हो । यो शल्यक्रिया गर्दा पुरुषको अण्डकोष थैलीमा एउटा सानो प्वाल पारी त्यहींबाट दुवैतिरका शुक्रकीट बाहिनी नली (वीर्यनली) बाँधेर काटिन्छ । भ्यासेक्टोमी गरेपछि पुरुषको यौन क्षमतालाई कुनै असर गर्दैन ।...
घ्यू र मिश्री एकैपटक खाँदा शरीरलाई मिल्छ यी ६ फाइदा, यस्तो छ खाने तरिका !
२०७९ वैशाख २४ गते १७:११
काठमाडौँ । गुणस्तरीय घ्यू र मिस्री एकैपटक खाँदा शरीरलाई थुप्रै फाइदा मिल्छ । मानिसले खाना खाएपछि मिस्री र सौफ त खान्छन् तर तपाईंले कहिल्यै घ्यूसँग मिस्री खानुभएको छ ? घ्यू स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छन् । घ्यूमा पाइने गुण र पोषक तत्व शरीरका थुप्रै...
बिहान निद्राबाट ब्यूँझने बित्तिकै बिर्सेर पनि नगर्नुहोस् यी ५ गल्ती, स्वास्थ्यमा खराब असर पर्ने
२०७९ वैशाख २४ गते १०:५०
काठमाडौं । दैनिक बिहान निद्राबाट ब्यूँझनेबित्तिकै हामी केही यस्ता गलत काम गर्छौँ जसको नकारात्मक असर हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्छ । यस्ता खराब बानीले हामीलाई स्लो, नेगेटिभ र चिडचिडा बनाउने गर्छ । यसका कारण घर र अफिसमा पनि हाम्रो सम्बन्ध खराब हुन थाल्छ । आउनुहोस्, यस्ता...
बिहान खाली पेटमा खान नहुने ६ खानेकुरा, यस्ता छन् फाइदाहरु !
२०७९ वैशाख २४ गते १०:४७
काठमाडौं । सामान्यतयाः बिहान खाली पेटमा चियासँग दिनको सुरुवात गर्ने प्रचलन छ । बिहान चियासँगै बिस्कुट वा पाउरोटी जस्ता खानेकुरा पनि खाने गरिन्छ । चियापछि विभिन्न खानेकुरा खाने गरिन्छ । जसमा प्रायः पुवा, समोसा, अमलेट, फलफूल आदि पर्छन् । बिहान खाली पेटमा खाइने कतिपय...
भुटेको लसुनमा छ हरेक समस्याको समाधान, यस्ता छन् फाइदाहरु
२०७९ वैशाख २४ गते १०:४५
काठमाडौं । हाम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने चिज हो लसुन। हामिले खासमा लसुनलाई तरकारीमा स्वादको लागी प्रयोग गर्ने गर्छौं । औषधीय गुणले भरिपूर्ण लसुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक छ । लसुन काँचो भन्दा पनि भुटेको राम्रो मानिन्छ । भुटेको लसुन खानाले हाम्रो पेटको...
123 … 19 पछिल्ला »